Ka soo qaad inaad qorsheyneyso inaad booqato Midowga Yurub wakhti dhow. Haddii ay sidaa tahay, waxaa jira talooyin taxane ah iyo macluumaadka safarka ee muhiimka ah taasi waxay kaa caawin doontaa inaad khibradaada ka dhigto mid aad u xiiso badan. Mid baa u maleyn kara in uusan runtii farqi weyn u dhexeyn karin tixgelinta lagama maarmaanka u ah safarka Yurub in comparison to any other place in the world. weli, kordhinta ballaadhan ee ku jirta, waxaa jira waraaqo taxane ah oo sharci ah oo aad ugu baahan karto inaad ku gasho Yurub dalxiis ahaan. Sidoo kale, cimilo aad u kala duwan, quirks, iyo waxyaabaha dhaqanka u gaarka ahi waa lama huraan in maskaxda lagu hayo halkaas.
1. Safarka Yurub: Grab Ahold Of Your Passport
Hadda waad ogtahay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato, we at Save A tareenka, diyaar u yihiin inay kaa caawiyaan dhammaan baahiyahaaga kale ee tareenka.